Yusuf Garaad: Facebook
Waxaan u mahadcelinayaa saaxiibbadeyda Facebook oo ay tiradoodu kor u dhaaftay 10,000 oo ruux (Friends + Followers).
Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa kuwa ra’yiga ka dhiibta wararka, sawirrada iyo macluumaadka kale ee aan ku soo bandhigo barteyda. Weliba haddana waxaan u mahadcelinayaa kuwa xog ogaalnimo, aqoon ama aragti qoto dheer oo nabadda u shaqeyneysa ama maskaxda kobcineysa nala wadaaga iyo guud ahaanba kuwa sida asluubta ah u jawaaba.
Waxaan codsanayaa in mowduuca laga hadlayo lagu koobnaado. Waxaan ku baaqayaa kuwa aflagaaddada sameeya in ay ka dhowrsadaan.
Waxaan saaxiibbada barteyda soo booqda uga digayaa aflagaaddo diimeed, shakhsi ama qowmiyadeed. Hanjabaad dagaal iyo hanjabaad nooc kasta oo ay tahay.
Raalli kama ihi in Dumarka si badownimo ah loogu dusiyo hadal lagu liidayo. Sida habar waliba wey ogtahay ama habar fadhida legdini la fudud iyo gabdhahaa caqli dhaama iyo faduusha nooc kasta oo ay tahay.
Waxaa kale oo aan ka digayaa in beel dhan ama gobol dhan la isku qaado oo la yiraahdo reer hebel waa lagu yaqaan iwm.
Dadka igu soo booqda barteyda ee haddana isku daya in ay falalka noocaas ah ku kacaan ha ogaadeen in aan ka xannibi doono isticmaalka barteyda Facebook.
Waxaan rajeynayaa in aan macluumaad badan oo wanaagsan aan halkan isku weydaarsan karno iyada oo aan cidna loo gefin.
Waa in aan u dhaqannaa sida ay haddaba saaxiibbo badan u dhaqmaan. Fikradda aad diiddan tahay sheeg waxa aad ku diiddan tahay ama wax aad adigu qabto soo bandhig.
Laakiin qofka fikirka qoray yuu kuu muuqan. Kuwaas oo aan anigu ka mid ahay. Waxaan qabaa in aan wax badan is wedyaarsan karno iyada oo qofna aan lagu xad gudbin karaamadiisa iyo sharaftiisa la dhowrayo.
Digniinahan farha badan ee aan bixinayo waxaan ula jeeda kuwa hadda ka hor ku qoray barteyda waxyaabo noocaas ah ama kuwa ay ka suurta gal tahay.
Barteyda Facebook qofkii soo booqda, waxaan ka codsanayaa in aad igu xushmeyso oo aanad ku xad gudbin sida aan ugu talo galay oo ah in talo iyo ra’yi aan xanaf lahayn la isku weydaarsado.
Waxaan ka cudur daaranayaa akhyaarta kale ee sharafta leh ee kuwaas ka tirada badan ee aan qormadaan soo hor dhigay.
Waad ku mahadsan tahay in aad akhrisay qormadaan.
Posted by Yusuf Garaad at 10:09:00